तपाई कुन रङको लिपिस्टिक लगाउँनुहुन्छ ? लिपिस्टिको रङले खोल्छ महिलाको यस्तो राज
एजेन्सी । मेकअपसँग महिलाको लागि निकै पूरानो सम्बन्ध रहेको छ । आजभोलि मेकअपमा उपयोग हुने चिजको नाम जरुर बदलिएको छ तर यस्तो होइन पहिलेको जमानामा महिला यी सबै चीजको प्रयोग गर्दैनथे ।
महिलाहरु सुन्दर देखिनको लागि पहिलेको जमानापनि सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्ने गर्दथे ।
लिपस्टिक हरेक महिलाको लागि मेकअपका लागि चाहिने महत्वपूर्ण चिज मध्येको एक हो । जब महिलाहरु घरबाट बाहिर निस्कीन्छन् उनीहरुलाई लिपस्टिक नभइ हुँदैन । कहिल्यै पनि कुनै पनि महिला लिपिस्टिक लगाउन भुल्दैनन् ।
तपाईलाई थाहा छ महिलाको सौन्दर्य बढाउने मात्र होइन उनीहरुको चरित्र स्वाभावको धेरै राज खोल्छ लिपिस्टिकले । कुन रङको लिपिस्टिक लगाउने महिला कस्ता हुन्छन् ? आउनुहोस् जानौ ।
जो महिला तिख्खर रातो वा ब्लड रेड ९रातो रङ० को लिपिस्टिक लगाउन मन पराउँछन् त्यस्ता महिलाहरु मानिसहरुसँग घुलमिल हुन रुचाउँछन् । साथै मानिसहरुको आर्कषणको केन्द्र बन्न मन पराउँछन् । यस्ता महिलाहरु आत्मविश्वासी हुन्छन् ।
हॉट पिंक कलरको लिपिस्टिक लगाउने महिलाहरु मेहेनती हुनुका साथै फूर्तिलो हुन्छन् । साथै यी महिलाहरु बुद्धिवान् पनि हुन्छन् । साथै यी महिलाहरु स्वार्थी र घमण्डी पनि हुन्छन् ।
वाइन कलरको लिपस्टिक लगाउने वा मन पराउने महिलाहरु बोल्ड हुन्छन् । उनीहरुलाई राम्राृेसँग थाहा हुन्छ कि मानिसहरुको आफूतिर कसरी आर्कषित गर्ने तरिका ।
बेबी पिंक कलरको लिपस्टिक लगाउन मन पराउने महिलाहर बच्चा जस्तै नाजुक र आर्कषक हुन्छन् । उनीहरुको रंगीन र मनोरञ्जनात्मक व्यवहारले मानिसलाई आफूतिर आर्कषित गर्छन् ।
महरून कलर मन पराउने वा लगाउने महिलाहरु निडर र धेरै मुडी स्वाभावका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरु हरेक काम परफेक्ट तरिकाबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् ।
कोरल कलर मन पराउने महिला जिम्मेवारी निभाउने र आफ्नो अधिकार लिन पनि पछि नहट्ने स्वाभावका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरु मानिसहरुको बीचमा निकै सम्मानका साथ प्रस्तुत हुने गर्दछन् ।
जो महिला ओरेन्ज कलरको लिपिस्टिक मन पराउँछन् ति महिलाहरु आफ्नो करियरलाई लिएर ज्यादै लगनशिल हुन्छन् । यस्ता महिलाहरुलाई समाजमा निकै सम्मान दिने गरिन्छ ।
जो महिला पर्पल लिपस्टिक लगाउँछन् ती महिलाहरु अन्दाजमा धेरै काम गर्ने र धेरै मानिसको बीचमा बस्न रुचाउँछन् ।